Odi na micro na miri miling maka nkenke anwuputa nke Carbon Steels, Alloy Steels, Hardened Steels, Copper Alloys, Aluminom Alloys na na, ihe nke ike n’okpuru HRC 65⁰. Ihe mkpuchi a bu ihe omumu nanotechnology, nwere oke nguzogide na akwa iguzogide.
Akwa arụmọrụ End Mill
Ngwaọrụ a dị maka nrụpụta arụmọrụ dị elu nke nchara, ihe nkedo HRC≤48⁰.With ọfụfụ ọfụma nke nkwekọ helix na-enweghị atụ, nkwekọ ahaghị nhata, belata mbibi ntụgharị ahụ. imi.
The ngwá ọrụ na ọtụtụ-eji ebu Ndinam, na akpaaka ụlọ ọrụ na na. Na-emetụta ọkara finishing na imecha nke obi tara mmiri ihe na HRC 50～68⁰.Can bepụ Preheldened Steels, Hardened Steels, Cast Iron, Ductile Iron.Apply on 3 axis na 5. axis CNC machine.For niile elu ekweghị ekwe ọgwụgwụ na nkume igwe nri, nke kacha mma jụrụ bụ ịfụ na abịakọrọ ikuku. Pụrụ iche imewe na U uzo kacha nke kacha dayameta, melite rigidity na mgbawa mwepụ, dịkwuo ndụ oge nke ọgwụgwụ mill.With elu kpọmkwem nkenke njikwa, nweta magburu onwe usoro nke elu ekweghị ekwe ígwè ihe.
Ọdabara elu arụmọrụ rụpụta nke ugbo elu titanium alloys, Okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ Alloys na igwe anaghị agba nchara. Site na ọjà ọjà nke unequal helix n'akuku 38 ～ 41⁰, ahaghị nhata pitch, ahaghị nke helical pitch, na-ebelata igwe ngagharị, arụmọrụ dị elu na ogo nke imecha elu.
Onye na - ejide ihe eji arụ ọrụ bụ naanị njikọ dị n'etiti igwe na ihe eji arụ ọrụ. Ọnọdụ zuru oke nke cone na spindle bụ ihe mbụ dị mkpa achọrọ iji nweta nsonaazụ kachasị mma. Ọsọ dị oke mkpa chọrọ ntụgharị dị elu. n'ụzọ dị irè karị ị nwere ike iji mee-mance nke ngwa ọrụ HSC dị oke ọnụ na-enye, dịka ogo kachasị dị elu pụtara na ọ nweghị oscillations na vibrations.
Cemented carbide bụ alloy nke tungsten carbide na cobalt.Tungsten carbide bụ isi ihe mejupụtara ma nye hardness.Cobalt bụ ihe nrapara na-adọ na-enye ndị siri ike. iguzogide.